methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > Methyl 1-(Boc-aMino)-3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -1-cyclopentenecarboxylate (3-288303-88), ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် methyl 8- အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 288303-88-8 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
တစ်ဦးမော်လီကျူး၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံအက်တမ်များနှင့်အတူတကွအက်တမ်ကိုင်သောဓာတုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏အစီအစဉ်လည်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါ methyl 1 - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate မော်လီကျူး 36 နှောင်ကြိုး (s) စုစုပေါင်းပါရှိသည်။ 17 Non-H ကိုနှောင်ကြိုး (s),3မျိုးစုံနှောင်ကြိုး (s),5Rotate နှောင်ကြိုး (s),3နှစ်ဆနှောင်ကြိုး (s), 1 ငါးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလက်စွပ်ကို (s), 1 Ester (s) (aliphatic) နှင့်ရှိပါတယ် 1 (thio-) carbamate (s) (aliphatic) ။
methyl 1 များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ၏ပုံများ - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးထားကြသည်:
methyl2၏ 1D ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပုံရိပ် - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate လည်းအော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများအတွက်စံသင်္ကေတဖြစ်သောအရိုးဖော်မြူလာ, ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ methyl 1 များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကာဗွန်အက်တမ် - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate ထောင့် (s) ကိုမှာတည်ရှိပါတယ်ခံရဖို့ဆိုလိုကြသည်နှင့်ကာဗွန်အက်တမ်မှပူးတွဲပါဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်ညွှန်ပြကြသည်မဟုတ် - တစ်ဦးချင်းစီကာဗွန်အက်တမ်ပင်ဖြစ်သည် လေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူကာဗွန်အက်တမ်များကိုအလုံအလောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့စဉ်းစား။
methyl3၏ 1D ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပုံရိပ် - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate ယင်းအက်တမ်၏သုံးရှုထောင်အနေအထားနှင့်သူတို့စပ်ကြားအနှောင်အဖွဲ့နှစ်ဦးစလုံးပြသပေးသောဘောလုံးကို-and ချောင်းကိုမော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-1-enecarboxylate - ဘွေ၏အချင်းဝက် methyl3များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံမော်ဒယ်တစ်လျှောက်လုံးအက်တမ်များနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုတစ်ဦးရှင်းလင်းအမြင်သည်နိုင်ရန်အတွက်လှံတံအရှည်ထက်ထို့ကြောင့်သေးငယ်သည်။
MDL အရေအတွက် MFCD20485913
InChI Key ကို ZXXOXQIRVGVCOU-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate
ထုပ်ပိုး N / A
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 241.287
အပြုံး ဖနွမ်းပင်မြို့၌ (= အို) C1 (CC ကို = CC1) NC (= အို) OC (C) (C) ကို C
assay N / A
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကြေညာချက်:
ရှိုက် IF w: လတ်ဆတ်သောလေကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်အသက်ရှူဘို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတွင်ကြွင်းသောအရာမှာစောင့်ရှောက်လော့။
/ အမျိုးသားရေး / ဒေသဆိုင်ရာ / ဒေသခံများနှင့်အညီရဲ့ contents / ကွန်တိန်နာများစွန့်ပစ်ခြင်း w
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) နည်းပညာပိုင်းဝန်ဆောင်မှု:
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် Methyl 1-(Boc-aMino)-3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8)
Apicmo ကြောင့် methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) တို့ပါဝင်သည်ထားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် synthesize ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်နေသည်။ ကျနော်တို့ကြွင်းသောအရာရှိသမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းစိတ်ချပါအမြောက်အမြား၌ဤထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate ဖော်ပြချက်
အဆိုပါဓာတုယင်း၏အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကာဗွန်အက်တမ်လေးခုဟိုက်ဒရိုဂျင်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူကပူဇော်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်နှင့်ဆက်စပ်သည်မထွက်ရ, ကာဗွန်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ပါဝင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ဟာ APICMO စာချုပ်အပေါ်နှင့်အကောင်းဆုံးပူဇော်ဖို့အများဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် regularity နှင့်အတူဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
methyl 1 - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate မော်လီကျူး 36 နှောင်ကြိုး (s) ကိုရှိသည်။ တဆယ်ခုနစ် Non-H ကိုနှောင်ကြိုး (s) ကိုသုံးမျိုးစုံနှောင်ကြိုး (s), ငါး Rotate နှောင်ကြိုး (s) ကိုသုံးနှစ်ဆနှောင်ကြိုး (s), တစျငါးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလက်စွပ်ကို (s), တစျခု Ester (s) (aliphatic) နှင့်ရှိပါတယ် တဦးတည်း (thio-) carbamate (s) (aliphatic) ။
methyl 1 များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ၏ပုံရိပ် - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးထား:
methyl2၏ 1D ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပုံရိပ် - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate လည်းအော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများအတွက်စံသင်္ကေတဖြစ်သောအရိုးပုံသေနည်းအဖြစ်လူသိများသည်။ methyl 1 များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကာဗွန်အက်တမ် - ((tert-butoxycarbonyl) မိုင်နို) cyclopent-3-enecarboxylate ထောင့်မှာတည်ရှိသည်နှင့်ကာဗွန်အက်တမ်မှပူးတွဲပါဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်ပြသကြသည်မဟုတ် - တစ်ဦးချင်းစီကာဗွန်အက်တမ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်4ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူကာဗွန်အက်တမ်ပေးပါ။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 288303-88-8
ဓာတုနာမကိုအမှီ methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate
MDL အရေအတွက်ကို MFCD20485913
Inchi သော့ချက် ZXXOXQIRVGVCOU-UHFFFAOYSA-N ကို
အပြုံးများ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ (= အို) C1 (CC ကို = CC1) NC (= အို) OC (C) (C) ကို C
% မိ CAS 95.0
CAS max ကို% 98.0
နာမ် methyl 1- (tert-butoxycarbonylamino) cyclopent-3-enecarboxylate
methyl n- (tert-butoxycarbonyl) -1-အမိုင်နို-cyclopent-3-enecarboxylate
1-tert-Butoxycarbonylamino-cyclopent-3-enecarboxylic အက်ဆစ် methyl Ester
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3 cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) နဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု
အမြဲတမ်းသင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဒီဓာတုအတူလုပ်ကိုင်ရှေ့မှာ gears ရှိသည်အာမခံပါသည်။ ဤရွေ့ကားလက်အိတ်တစ်ဦးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့်လိုအပ်သောဖိနပ်များပါဝင်သည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော spillage အဖြစ်မတော်တဆအဆက်အသွယ်သို့ရတဲ့ထံမှသင်တို့အားကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်း၏အငွေ့ရှူရှိုက်နေကြကြောင်းထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ အများဆုံးကာကွယ်မှုများအတွက်လေထုသန့်စင်နဲ့အတည်ပြု Full-မျက်နှာအသက်ရှူကိရိယာတပ်ဆင်ထားသောမျက်နှာဖုံးကြိုးစားပါနှင့်အသုံးပြုပါ။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှု
သင့်ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း spillage ၏အမှု၌လုံခြုံရေးရေချိုးခန်းအပါအဝင်လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားရပါမည်, ရေ, တစ်ဦးမီးသတ်ဘူး, ပစ္စည်းကိရိယာများသန့်ရှင်းရေးနှင့်အလုံအလောက်လေဝင်လေထွက် running နှင့်အတူပုတ်။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate (288303-88-8) နဲ့မတော်တဆအဆက်အသွယ်ကိစ္စများတွင်ပထမဦးစွာအကူအညီအစီအမံ
ထိုခဏခြင်းတွင်လုံခြုံရေးရေချိုးခန်းသို့သွားနှင့်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာစာရေးနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ချွတ်သုတ်ခြင်း။ သင်၏အဝတ်တို့သည် spillage တယ်လျှင်ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ကိုဆေးကြောခြင်းမပြုမီဘေးဒဏ်သင့်အဝတ်ပေါ်တွင်တင်မထားပါနဲ့။
သားကောင်ကိုချက်ချင်းအလုံအလောက်လေဝင်လေထွက်နှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းသောဧရိယာသို့မဟုတ်ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ရပါမည်။ အသက်ရှူများအတွက်အဆင်ပြေအနေအထားအတွက်သားကောင်အိပ်လေ၏။ s ကို / သူအသက်ရှုပြဿနာများရှိခြင်းသည်ဆိုပါကအတုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုကြိုးစားစီမံခန့်ခွဲ။ နောက်ထပ်အကူအညီအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါချီတုံချတုံမထားပါနဲ့။
အန်သွေးဆောင်မထားပါနဲ့။ အဲဒီအစား, ဘေးဒဏ်သင့်တဦးချင်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူ / သူမ၏ပါးစပ်လျှော်ရေ၏ထက်ဝက်လီတာမသောက်ရသင့်ပါတယ်။ သတိလစ်နေလျှင်, ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြာလော့။
Methyl 1-(Boc-aMino)-3-cyclopentenecarboxylate(288303-88-8) storage
အမြဲတမ်းစက်နှိုးသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မဆိုဒြပ်စင်မဆိုဖြစ်နိုင်သောအရင်းအမြစ်ကနေဓာတုစောင့်ရှောက်လော့။ အမြဲတမ်းတစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်တင်းကျပ်စွာတံခါးပိတ်နှင့်ဘဏ္ဍာကွန်တိန်နာစောင့်ရှောက်လော့။ ကလေးများသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များဏလက်လှမ်းမမီကနေဝေးအောင်ထားပါနဲ့အမြဲမူရင်းထုပ်ပိုးအတွက်စောင့်ရှောက်လော့။
Methyl 1-(Boc-aMino)-3-cyclopentenecarboxylate(288303-88-8) handling
အခိုးအငွေ့, အငွေ့, ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့ရှူရှိုက်မိခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ
သင်တို့အပေါ်မှာအကာအကွယ်ဂီယာရှိသည်သေချာ; ဤအသင့်ရဲ့အရေပြား, မျက်စိ, ပါးစပ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်သို့ရတဲ့ထံမှ methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate ကာကွယ်တားဆီးဖို့လက်အိတ်, မကျြနှာကိုမျက်နှာဖုံး, မျက်မှန်နဲ့ဖိနပ်များမှာ
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate သုံးပြီးပြီးနောက်လုပ်ဖို့အမှုအရာ
mishandled လျှင် 288303-88-8 အဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်။ သေချာပါစေ,
သင်သည်သင်၏သန့်ရှင်းရေးစောငျ့ရှောကျ keenly ။ စားတူသောအရာအားလုံးထက်လုပ်နေတာမတိုင်မီသင်၏လက်ကိုဆေးကြော
မည်သည့်အချည်းနှီးသောကွန်တိန်နာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အလုပ်လုပ်ဧရိယာကို clean up Get
သငျသညျမတော်တဆဓာတုဖိတ်လြှငျ, စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး။ သင်အနီးတစ်စုပ်ပစ္စည်းရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အဆိုပါယိုဖိတ်မှုဖွင့်စိမ်နှင့်စွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာဖို့များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ထိုဒေသတွင်လေခတ်နဲ့ရေများများနှင့်အတူထိုဒေသတွင်ဆေးကြောပါ။ ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါအပေါ်ရှိသင့်အကာအကွယ်အဝတ်ရှိသည်ဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ထိုဒေသတွင်ဓာတုငွေ့ကိုလျော့ချရန်အခိုးအငွေ့နှိမ်နင်းယူပါ။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate တည်ငြိမ်ရေးကို
စံအပူချိန်နှင့်ဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင်အသုံးပြုသိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ 288303-88-8 အတော်လေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ mishandled ဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်အတူအသုံးပြုသောလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့ hectic နိုင်ပါတယ်။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate စွန့်ပစ်ခြင်း
ဤသည်မှာအထူးစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်နှင့်စွန့်ပစ်ရန်ကြွလာသောအခါတွင်ပင်အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရပါမည်။ သင်သည်သင်၏ဒေသခံသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများကအောက်ပါကဖယ်ရှားပစ်ရသင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအများဆုံးအာမခံချက်များအတွက်ဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာအမှိုကျပုံးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate တင်ပို့သတင်းအချက်အလက်များ
အားလုံးအဆင့်ဆင့်၌ဤထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအားလုံးဒေသခံဖက်ဒရယ်နှင့်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများနှင့်စောငျ့ရှောကျ။ ဤရွေ့ကား အသုံးပြု. သိုလှောင်မှုနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များသုတေသနပြုမှုအပေါငျးတို့သဒေသများရှိရေတွင်းအတွေ့အကြုံရှိဖြစ်ကြပြီး methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate ကိုရည်မှတ်အကြွင်းမဲ့အာဏာအသိပညာရှိသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Chromatography, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိပ္ပံ, ဓာတုပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. နားလည်ပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ကောင်းစွာသုတေသနပြုခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate သာသနာကိုနှင့်စျေးနှုန်း
ဒီထုတ်ကုန်တင်းကြပ်စွာသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင်တို့သည်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျှင်သင် bulk အတွက်အမိန့်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကအမိန့်ရစေတှနျ့ဆုတျမထားပါနဲ့။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်အမျိုးသားရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, methyl 1- (အဆောက်အအုံ-အမိုင်နို) -3-cyclopentenecarboxylate, ကဏ္ဍများ 1-10 ။
တစ်ဦးကများ၏အချိုးမညီ Synthesis များအတွက်နည်းလမ်းတစ်-disubstituted Aminopage 410-415: ဝီလျံ Dvorak Shrader ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က The ဒီဇိုင်း, Synthesis နှင့်အသေးစားမော်လီကျူး Template ၏အကဲဖြတ်တစ်ဦး Peptide ၏ A-helix ခွေးတည်ငြိမ်စေရန်။
Murray Goodman, Claudio Toniolo, လူး Moroder, Arthur ဖေလဇ်မင်း, Georg Thieme Verlag, Houben-Weyl, အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ Vol ၏နည်းလမ်းများ။ အီး 22e, 4th Edition ကိုဖြည့်စွက်: Peptides နှင့် Peptidomimetics ၏ Synthesis: စာရေးသူညွှန်းကိန်းများနှင့်ခြံဝင်းအညွှန်းကိန်း, စာမျက်နှာ 12-15 ။